राजनीति – Page 341 – YesKathmandu.com
एमालेको चेतावनीपछि चितवनमा कोइराला र प्रचण्डबिच ‘वान टु वान’ वार्ता
एस काठमाडौं मङ्गलबार १९, फागुन २०७१
काठमाडौं । सत्ता साझेदारी दल नेकपा एमालेले संविधान निर्माणको ग्यारेन्टी मागेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विपक्ष दलसँग लहसिन थालेका छन् । सत्ता साझेदार दल एमालेले संविधान बन्न ग्यारेन्टी नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी…
लोकमान सर हिम्मत छ यिनीमाथि कारवाही थाल्ने ?
काठमाडौं । अख्तिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले आफ्नो स्थापना दिवसको कार्यक्रममा भने ‘अव साना मात्र हैन ठुला माछालाई पनि छोड्दिन, यो काम आजै बाट थाँले ।’ उनले जस्तो सुकै अभिब्यक्ति दिएपछि…
एमालेले भन्यो,‘संविधान नबन्ने हो भने सरकारमा किन बस्ने ?
काठमाडौं । एक वर्षअघि सातबुँदे सहमतिमार्फत् काग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेको एमालेले सरकारमा सहभागिताको औचित्यतामाथि पार्टीभित्र समिक्षा गर्न थालेको छ। संविधान निर्माणको मुख्य उद्देश्यसहित सत्तामा सहभागी भएकाले त्यो काम अघि बढ्न नसक्दा सरकारमै रहने कि नरहने…
संविधान निर्माण प्रक्रियामा कांग्रेस नगए सवै सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने एमालेको चेतावनी
एस काठमाडौं सोमबार १८, फागुन २०७१
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अगाडी नबढे सत्ता साझेदारीसँगै सवै प्रकारका सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने दोस्रो सत्तारुढ दल एमालेले चेतावनी दिएको छ । एमाओवादीसहितका विपक्षदलसँग सहमतिको सम्भावना क्षण हुँदै गएको निस्कर्ष…
‘जुवाई साव’ले नटेरेपछि रन्कीए पशुपतिशम्सेर
काठमाडौं । राजनीतिक भागबन्डामा संबैधानिक निकायको पदपूर्ति गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एक सदस्यको भाग पायो । राप्रपाको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्य पद परयो । उक्त पदमा अध्यक्ष पशुपतिशम्सेर राणाले पूर्वजलस्रोत सचिव द्धारिकानाथ…
प्रचण्ड, सिके राउत, कमल थापा र खुमबहादुर खड्का सरकारका सुरक्षा चुनौतिकार
काठमाडौं । सरकारले विपक्षी दलदेखि आ–आफ्ना माग राखेर आन्दोलनमा रहेका विभिन्न दलका गतिविधिलाई ‘सुरक्षा चुनौती’को सूचीमा राखेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा रहेका दल,…